System Administration ( Data Center Virtualization ) – i-connect
Cisco Certified Network Association (CCNA 200-125)
Professional Certificate in Essential Management
Professional Certificate in English4Skills
IQN Diploma in Business English
IQN Diploma in Human Resource Management
System Administration ( Data Center Virtualization )
Professional Certificate in System Administration
စာတွေ့လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်မှုအပြည့်အဝရှိသည့် IT ပညာရှင်များဖြစ်မြောက်စေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ကြားပေးနေသည့် i-Connect မှ အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာ (Singapore နိုင်ငံအပါအဝင်) ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာများကိုလည်း တက်ရောက်သောကျောင်းသားများအတွက် သီးသန့်ဆွေးနွေးအကြံပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။Data Center Virtualization နည်းပညာများနှင့် Linux OS များတွင် ကျွမ်းကျင်သော လူငယ်ပညာရှင်များထွက်ပေါ်လာရေးအတွက် System Administration (Virtualization Based) ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာလဲ IT Infrastructure များတွင် Virtualization နည်းပညာများဖြစ်တဲ့ Server Virtualization, Network Virtualization, Storage Virtualization, Desktop Virtualization များစတဲ့နည်းပညာများစွာတို့ကိုအသုံးချနေပြီဖြစ်တာကြောင့် အနာဂတ်အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အနေနဲ့လည်းလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေတာကြောင့် Virtaulization နဲ့ Linux ကိုပေါင်းစပ်ပြီး Lab များတည်ဆောက်ကာ ထို Lab များနှင့်အတူ တိုက်ရိုက်သင်ကြားရမှာဖြစ်လို့ Software-Defined Data Center, Linux Administration နဲ့ Data Center Virtualization များကိုစိတ်ဝင်စားသော လူငယ်များအား လူဦးရေကန့်သတ်ထားတာကြောင့် အမြန်လာရောက်အပ်နှံကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
Linux OS အတွက် Cent OS7ပေါ် အခြေခံပြီး Server Administration ပိုင်းများဖြစ်တဲ့
1.Linux Permission and User Control
2.Linux Useful Commands
3.IPv4 and IPv6 Configuration
4.File Server Installation and Configuration
5.Web Server Installation and Configuration
6.DNS Server Installation and Configuration
7.Filtering with Linux Firewall
8.VPN Installation and Configuration
9.Troubleshooting the Linux System စတဲ့ အကြောင်းအရာများပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
CentOS ကိုအခြေခံပြီးလေ့လာရမှာဖြစ်တာကြောင့် မိသားစုတစ်ခုထဲဖြစ်တဲ့ RedHat Linux Server ကိုပါတစ်ခါတည်းကျွမ်းကျင်သွားမှာဖြစ်ပြီး RHCA Exam လေ့လာဖြေဆိုချင်သူများအတွက်ပါ အထောက်အကူရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Linux OS များကို Platform ပေါင်းစုံပေါ်မှာ Installation ပြုလုပ်ပုံများနဲ့ Basic Command Line အသုံးပြုပုံများကိုပါ ထည့်သွင်းပေးထားလို့ Linux ကိုစတင်လေ့လာမဲ့သူများပါ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
WMware နဲ့ Citrix တို့ကိုအခြေခံပြီး လက်ရှိ DataCenter နဲ့ IT Infrastructures များတွင် Server များအား Virtualization ပေါ်အခြေခံ ၍ တည်ဆောက်ပုံများကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပြီး Server များစွာအား Centeralized Management ပြုလုပ်ပုံများ၊ Virtual Machines များအား Configuration, Management နဲ့ Migration ပြုလုပ်ပုံများလဲပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Zero Down Time ဖြစ်အောင် Infrastructure များအား တည်ဆောက်ပုံများအထိလေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
1.Introduction to Server, Network and Storage Virtualization
2.Hypervisor Concept and Installation
3.Installation the Virtual Machine on the Hypervisor
4.Cloning the Virtual Machine
5.Creating the Virtual Machine Template
6.Configuring the Management Network on Hypervisor
7.Virtual Switch Concept and Configuration
8.Network Virtualization Concepts
9.Storage Configuration and File Management on Hypervisor
10.Many Type of Storage Concepts
11.Centralized Management with many Hypervisors
12.Centralized Management with all Virtual Machines
13.Migrating Power-on, Power-off and Suspended Virtual Machines
14.Installing iSCSI Network Based Storage
15.Centralized Network Based Storage
16.Storage Virtualization (VSAN)
17.Resources Allocation and Automation
သင်တန်းပြီးဆုံးသွားပါက ISP, Medium and Large Enterprise နဲ့ Data Center များတွင် System Engineer အဖြစ်စတင်လျှောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြ
စ်တဲ့အပြင် ခေတ်သစ်နည်းပညာများဖြစ်တဲ့ DataCenter Virtualization အကြောင်းအရာများကိုပါထည့်သွင်းပေးထားလို့ Virtual Professional လမ်းကြောင်းကိုပါ အထောက်အပံ့ ရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်သူများအနေနဲ့ လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်များတွင်များစွာလိုအပ်ပြီး လစာကောင်းမွန်သော Linux Certification များဖြစ်တဲ့ CompTIA Linux+, LPIC 1 နဲ့ LPIC2စတာတွေကိုဖြေဆိုဖို့ပါ အထောက်အပံ့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ Virtual နည်းပညာများအတွက်လည်း VMware Certification များဖြစ်တဲ့ VCA-DCV, VCP-DCV၊ Citrix Certification များဖြစ်တဲ့ CCA နဲ့ CCP များကိုဖြေဆိုချင်သူများအတွက်လဲ အထောက်အကူများစွာရရှိသွားမှာဖြစ်ပြီး Virtual Professional နဲ့ Expert များအဖြစ်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Exam နဲ့ပတ်သတ်သော အချက်အလက်များကို i-connect Training Center မှ ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
i-connect & Technopark is one stop service center for students aiming to study abroad. Our professional education consultants are ready to assist for you.
Oversea Education Service
No.151, 1st Floor, Ngu Wah Street, Ahlone Township, Yangon, Myanmar 11121
09 453 777 223, 09 453 777 224
Professional Training in Myanmar
No. 46(A), Thit Taw Street,Ahlone Township, Yangon
09 964 545 214, 09 799 966 441, 09 403 368 383 , 09 781 599 967